Graphic Card တွေရုံဂရပ်ဖစ်ထက်ပိုများအတွက်အသုံးဝင်သောများမှာ
Windows ကို Drivers & ဟာ့ဒ်ဝဲ
ရုံ 3D Graphics သန်းနောက်ထပ်အဘို့အ Graphic Card တွေအသုံးပြုခြင်း
by မာကု Kyrnin
ဘယ်လိုအဆိုပါ graphic processor အထွေထွေပရိုထဲသို့ဖွင့်နေသည်
အားလုံးကွန်ပျူတာစနစ်များ၏စိတ်နှလုံးသည် CPU ကိုသို့မဟုတ် Central processing unit နှင့်အတူတည်ရှိသည်။ ဒါကယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် Processor ကိုဖွင့်မဆိုတာဝန်နှင့် ပတ်သက်. ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကအချို့သောအခြေခံသင်္ချာတွက်ချက်မှုမှကန့်သတ်ထားပါသည်။ ရှုပ်ထွေးတာဝန်များကိုတစ်ဦးမဟုတ်တော့အပြောင်းအလဲနဲ့အချိန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ပေါင်းစပ်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ပရိုဆက်ဆာအမြန်နှုန်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်လူအများစုမဆိုစစ်မှန်သောနှေးသတိထားမိကြပါဘူး။ ကြောင်းကယ့်ကွန်ပျူတာ၏ဗဟို Processor ကိုနှိမ့်ချ bog နိုင်ပါတယ်သော်လည်းတာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ GPU ကိုသို့မဟုတ်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာယူနစ်နှင့်အတူဂရပ်ဖစ်ကတ်များများစွာသောလူသူတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာများတပ်ဆင်သောအနည်းငယ်အထူးပြုပရိုဆက်ဆာများ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ ဤရွေ့ကားပရိုဆက်ဆာ 2D နှင့် 3D ဂရပ်ဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သောရှုပ်ထွေးတွက်ချက်မှုကိုကိုင်တွယ်။ တကယ်တော့သူတို့အခုဗဟို Processor ကိုနှိုင်းယှဉ်အချို့သောတွက်ချက်မှု rendering မှာပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်အထူးပြုဆည်းပူးကြသည်။ ထိုကြောင့်တစ်ဦး CPU ကိုဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်မြှင့်ရန်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ GPU ကို၏အားသာချက်ကိုယူပြီးသောလှုပ်ရှားမှုယခုလည်းမရှိ။
အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ 3D ဂရပ်ဖစ်ပြင်ပပထမအစစ်အမှန်လျှောက်လွှာကိုဗီဒီယိုဖြစ်ခဲ့သည်။ high definition ဗွီဒီယို streams သူတို့၏မြင့် resolution ကိုရုပ်ပုံများကိုထုတ်လုပ်ဖို့ချုံ့အချက်အလက်များ၏ဒီကုဒ်ဒါလိုအပ်သည်။ ATI နှင့် NVIDIA နှစ်ဦးစလုံးသည်ဤဒီကုဒ်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာထက် CPU ကိုမှီခိုနေဖြင့်ကိုင်တွယ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုပေးတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကုဒ်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒါကကို PC ပေါ်တွင် HDTV သို့မဟုတ် Blu-ray player ရုပ်ရှင်များကြည့်ရှုများအတွက်ကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ ရန်ပြောင်းရွှေ့အတူ 4K ဗီဒီယို ဗီဒီယိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သော processing power သာ. ကြီးမြတ် een တဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီ၏ဆွယ်တယောက်ကိုတယောက်ဂရပ်ဖစ်ပုံစံကနေဂရပ်ဖစ်ကဒ်အကူအညီနဲ့ transcode ကဗီဒီယိုရှိသည်ဖို့စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဥပမာတစ်ခုထိုကဲ့သို့သော DVD ကိုမီးရှို့ခံရဖို့ encoded ခံကြောင်းဗွီဒီယိုတစ်ခု cam ကနေအဖြစ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုအရင်းအမြစ်ကိုယူပြီးခံရပေလိမ့်မည်။ ဤသို့ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ကွန်ပျူတာတ format နဲ့ယူရမယ်နှင့်အခြား၌ပြန်လည်ဆပ်။ ဤသည်ကွန်ပျူတာပါဝါအများကြီးအသုံးပြုသည်။ ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာများ၏အထူးဗီဒီယိုအားစွမ်းရည်များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကွန်ပျူတာပိုမြန်ကပဲ CPU ကိုအပေါ်မှီခိုလျှင်ထက် transcoding လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအပြီးသတ်နိုင်ပါ။
SETI & # 64; မူလစာမျက်နှာ
တစ်ဦးကွန်ပျူတာများ GPU ကိုပေးပိုကွန်ပျူတာပါဝါ၏အားသာချက်ယူနောက်ထပ်အစောပိုင်းလျှောက်လွှာမူလစာမျက်နှာ @ SETI ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေဒီယိုအချက်ပြလှိုင်းအပိုမြေပြင်အခြေစိုက်ထောက်လှမ်းရေးစီမံကိန်း၏ရှာရန်များအတွက်ဆန်းစစ်ခံရဖို့ခွင့်ပြုခေါက်လို့ချေါတဲ့ဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာ application ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ GPU ကိုအတွင်းအဆင့်မြင့်တွက်ချက်မှုအင်ဂျင်သူတို့ကိုရုံ CPU ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိန်ပေးထားသောကာလ၌လုပ်ငန်းများ၌နိုင်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သူတို့က NVIDIA အဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းရယူနိုငျကွောငျးကို C code ကိုတစ်အထူးပြုဗားရှင်းဖြစ်သော CUDA သို့မဟုတ်ကွန်ပြူတာညျ့ဝ Device ကိုဗိသုကာပညာ၏အသုံးပြုမှုမှတဆင့် NVIDIA ဂရပ်ဖစ်ကတ်များနှင့်အတူဤလုပ်ဖို့နိုင်ကြသည်။
Adobe က Creative Suite 4
GPU ကိုအရှိန်၏အားသာချက်ယူနောက်ဆုံးပေါ်ကြီးတွေအမည်ဖြင့်လျှောက်လွှာကို Adobe ရဲ့ Creative Suite ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Acrobat အပါအဝင် Adobe ကရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များအများအပြားပါဝင်သည် Flash Player ကို , ကို Photoshop CS4 နဲ့ Premiere Pro ကို CS4 ။ အမှန်ကတော့, ဗီဒီယိုမှတ်ဉာဏ်အနည်းဆုံး 512MB နဲ့ OpenGL 2.0 ဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အတူမည်သည့်ကွန်ပျူတာကဤ application များအတွင်းအမျိုးမျိုးသောလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီအစွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာ Adobe က applications များထည့်သွင်း? အထူးသဖြင့် Photoshop ကိုနှင့်ကို Premiere Pro ကိုအဆင့်မြင့်သင်္ချာမလိုအပ်ကြောင်းအထူးပြု filter များ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားရှိသည်။ ဤအတွက်ချက်မှုအများအပြားများကိုဖြုတ်ပစ်ရန်အ GPU ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, ကြီးမားပုံရိပ်တွေသို့မဟုတ်ဗွီဒီယို streams များအတွက် rendering အချိန်ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။ အခြားသူတွေကိုသူတို့အသုံးပြုတာဝန်များကိုသူတို့အသုံးပြုတဲ့ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပေါ် မူတည်. ကြီးမားတဲ့အချိန်လာဘ်မြင်နိုင်ပါသည်စဉ်အချို့သောအသုံးပြုသူများအဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်သတိထားမိပေမည်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်း၏စကားကိုသင်တို့ကြားရပြီ Bitcoin ကို virtual ငွေကြေးကိုတစ်ပုံစံဖြစ်၏။ သင်အမြဲမယ့်နိုင်ငံခြားငွေကြေးထိုသို့လဲလှယ်တူသောကြောင့်ရိုးရာငွေကြေးအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေဖြင့်တစ်ဦးလဲလှယ်မှတဆင့် Bitcoin ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ကို virtual ငွေကြေးရတဲ့၏အခြားနည်းလမ်းလို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ် Cryptocoin သတ္တုတွင်း ။ အရောင်းအနှငျ့ဆကျဆံဘို့တွက်ချက်မှု hash တွေကို processing များအတွက်ထပ်ဆင့်လွှင်အဖြစ်သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုနေသည်ဆင်းအနာဆိုးကဘာလဲ။ တစ်ဦးက CPU ကိုတဦးတည်းအဆငျ့မှာဒီလုပျနိုငျပေမယ့်တစ်ဦးဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပေါ်မှာ GPU ကိုဤသို့ပြုတဲ့အများကြီးပိုမြန်နည်းလမ်းပေးထားပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်တစ် GPU ကိုအတူ PC ကိုပိုမြန်ကြောင့်မပါဘဲတဦးတည်းထက်ငွေကြေးကို generate နိုင်ပါတယ်။
အပိုဆောင်းစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏အသုံးပြုမှုကိုအများဆုံးမှတ်သားဖွယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု OpenCL သို့မဟုတ်ဖွင့်ပါကွန်ပျူတာဘာသာစကားကိုသတ်မှတ်ချက်များ၏မကြာသေးမီကဖြန့်ချိမှလာ။ တစ်ချိန်ကအကောင်အထည်ဖော်ဒါဟာသတ်မှတ်ချက်အမှန်တကယ်ကွန်ပျူတာအရှိန်မြှင့်ဘို့တစ် GPU ကိုနှင့် CPU ကိုအပြင်အတူတကွအထူးပြုကွန်ပျူတာပရိုဆက်ဆာများ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံဆွဲပါလိမ့်မယ်။ ဒီသတ်မှတ်ချက်အပြည့်အဝအတည်ပြုခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးတာနဲ့ applications များ၏လူအမြိုးမြိုးအလားအလာလုပ်ငန်းများ၌နိုင်အချက်အလက်များ၏ပမာဏကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောပရိုဆက်ဆာများ၏ရောနှောထံမှအပြိုင်ကွန်ပျူတာကနေအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။
အထူးပြုပရိုဆက်ဆာကွန်ပျူတာများမှအသစ်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ကြ၏။ ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာဟာကွန်ပျူတာကမ်ဘာပျေါတှငျပိုမိုအောင်မြင်သောနှင့်အသုံးများပစ္စည်းရုံတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ အဆိုပါပြဿနာကိုဂရပ်ဖစ်ပြင်ပ applications များမှအလွယ်တကူသည်ဤအထူးပြု processors ကိုအောင်ခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာစာရေးဆရာများတစ်ခုချင်းစီကိုဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာမှတိကျတဲ့ code ရေးသားဖို့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦး GPU ကိုများကဲ့သို့တစ်ဦးကို item ကိုရယူသုံးဘို့ပိုပြီးပွင့်လင်းစံချိန်စံညွှန်းများအဘို့တွန်းအားပေးနှင့်အတူ, ကွန်ပျူတာများကိုအရင်ကထက်သူတို့ရဲ့ဂရပ်ဖစ်ကတ်များထဲကပိုပြီးအသုံးပြုမှုကိုရသွားကြသည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကပင်ယေဘုယျ Processor ကိုယူနစ်မှဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာယူနစ်ကနေနာမကိုအမှီပြောင်းလဲပစ်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
ATX 24 pin ကို 12V ပါဝါထောက်ပံ့ရေး Pinout
Inductors - inductors အမျိုးအစားများ
တစ်ဦး PSU စုံစမ်းတစ်ဦးကို Power Supply စမ်းသပ်သူကိုအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
ဗိုလ်မှူး BIOS ကိုထုတ်လုပ်သူများအဘို့, BIOS Setup ကို Utility ကို Access ကိုသော့ချက်များ
Inductors ၏ Applications ကို
SATA 15-Pin, Power Connector Pinout
တစ် Computer ကို Reboot လုပ်နည်း
ဆန်းစစ်ခြင်း: Braven BRV-XXL အိတ်ဆောင်ကြိုးမဲ့ Bluetooth ကိုနာယက
အဆိုပါ iPad Mini ကို2ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Apple ရဲ့ပထမဦးစွာငါး-စတား Tablet ကို
ဝက်ဘဝက 2: အဆိုပါလိမ္မော်ရောင် Box ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း (PS3)
Kindle Fire HD ကိုသို့မဟုတ် Google Nexus7ကို?
OS X ကိုခြင်္သေ့နှင့်အတူဝေမျှမယ် Windows7ကိုဖိုင်များ
အဆိုပါ HTML5 ကိုအပိုင်း Element ကိုအသုံးပြုနည်းလိုက်တဲ့အခါ
ကျောင်းသားများအဘို့ Microsoft ရဲ့အကောင်းဆုံး Templates ကို
ထိပ်တန်းအခမဲ့ဂီတဖန်တီးတဲ့ Software များ
အယောင်ဆောင်များ Phishing မှစ. ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ
အစုံလိုက်သုံး packet sniffer နှင့်သူတို့ကဘယ်လိုအလုပ်ပါနဲ့ဘာတွေလဲ?
က Standard အီးမေးလ်လက်မှတ်ခြားအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
Apple က HomePod vs အမေဇုံ: Echo: သင်ဘယ်တစ်ခုမှာလိုအပ်သလား?
က IPS Display ကိုနောက်ကွယ်မှာနည်းပညာမှတစ်ဦးက Beginner ရဲ့လမ်းညွှန်
အဆိုပါ GE X5 ကင်မရာ၏တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင့်ရဲ့ Car တွင်မိုဘိုင်းတီဗီ Watch လုပ်နည်း
Samsung က 2015 လေး Blu-ray disc ကစားသမား Up ကိုကမ်းလှမ်း
တစ်ဦး, iPod ကို format လုပ်နည်း